Archlinux anosarudza kusaisa iyo AIF inosimudza | Kubva kuLinux
Archlinux anosarudza kusaisa iyo AIF inosimudza
Blazek | | Kugoverwa, GNU / Linux
Mufananidzo mutsva wekumisikidza Arch Linux 2012.07.15 uko mutemo mutsva we Arch zvine chekuita nesisitimu zvivakwa.
Vagadziri veiyi distro vafunga kusabatanidza iyo yekumisikidza IDA (Arch Kuisa Sisitimu), izvo zvinoita kuti vashandisi vasinga zive nekuparadzirwa uku, kana kuuya kubva kune zvimwe zvinogoverwa zvakanyanya kuitirwa mushandisi wepamba uye masisitimu akadai Windows o mac os, zvakaoma kwazvo kuti vaiise, nekuti kubva zvino kuisirwa ichave izere kuburikidza neiyo terminal.
Zvisinei, pawiki ivo vakatumira diki gwaro rekuisa yemufananidzo mutsva, kunyangwe parizvino uri muChirungu, ndine chokwadi chekuti kushandurirwa mumitauro yakati wandei kuchakurumidza kuitwa. Pamwe munguva pfupi ini ndichaburitsa diki dzidziso yekuti ungaisa sei iyo system nemufananidzo mutsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Archlinux anosarudza kusaisa iyo AIF inosimudza
Iyo sarudzo inoratidzika kunge iri yekushomeka kwekuchengetedza uye mipiro mukusimudzirwa kweAIF. Izvo zviri pachena ndezvekuti aya mamwe madaro Arch kubva kune vashandisi vevashandisi uye anounza padhuze kune vese vanofarira kudzidza kuvaka maitiro kubva pakutanga.
Ini handinzwisise kuti nei vaita iyi sarudzo so * luminous *.
Handisati ndamboedza ArchLinux, kunyangwe ndanga ndichida kwechinguva. Kwandiri shanduko iyi, kure nekundityisidzira, inoita kuti kuisa Arch kuve kunokwezva, ini ndinoda iyo yekupedzisira uye nematambudziko ehungwaru. Zvandiri kushamisika ndezvekuti shanduko iyi ine chikonzero chehunyanzvi here, kana ingori sarudzo yezvematongerwo enyika, nzira yekuona kuti "chete" vashandisi veLinux vepamberi vanogona kushandisa Arch.
Zvakanaka kwandiri pakubvisa akati installer vakatora nyasha dzakanzi distro had, sezvo ati installer yaityisa vazhinji hehehe xD!. [Joke] 😛
Ivo vakabvisawo maIOs akasiyana aive papeji rekutora uye ikozvino paine imwe chete ine hunyanzvi hwekuvaka uye hwekuisa network.
Rakarurama, uye ndechimwe chezvinhu zvandakafarira zvishoma, nekuti vanokumanikidza kurodha pasi mufananidzo muhombe kupfuura pakutanga.
Uye zvinopesana nehunyanzvi hwaArch hwekushaya chero chausingade. Sei kundimanikidza kurodha pasi uye kunyora maviri maviri mufananidzo kana ini ndichiziva pamberi pekuti ini ndiri kuzongoshandisa iyo 32-bit mufananidzo?
Nekuzara kweWIKI, hapana dambudziko neARCH, uyezve, nekuda kwenharaunda yayo huru, chero kutya kunofanira kurasikirwa. Saizvozvowo, yakazara 2012 vakomana vaigona kunge vakapfeka uye voita kuti ive nyore. Uye kune mapoinzi ekumisikidza, senge kunyora manyore mapoka, uye ini ndinopihwa kwete kubva kuPRO asi kubva kuIDIOT. Kana iwe uchida kuti vaise sudoku mune akasiyana ekumisikidza STEP uye kana asina kugadziriswa mumaminitsi mashanu, iwe unofanirwa kuita zvese zvakare. Icho chinhu chimwe kudzidza uye chimwe kutambisa nguva yangu.
"Chinhu chimwe chete kudzidza uye chimwe kutambisa nguva yangu."
Ameni hama. +1
Ndekupi kwandinogona kurodha yapfuura vhezheni? Saka ini ndinoiisa neAIF uye ndobva ndavandudza iyo system. Nhau idzi dzandinetsa, ndanga ndafunga kuti ndiise muna Nyamavhuvhu. Ini handisi mutsva ku linux, asi ini ndoda vakagadzika vakagadzika saDebian
Zvakanaka, zvinosuruvarisa, iwe haugone kudhawunirodha mufananidzo wekare kubva kuArch peji repamutemo, nekuti mifananidzo yese yakapfuura yakabviswa kubva kumaseva uye chete iyo nyowani nyowani yakaitwa kuti iwanikwe.
Zvinosuruvarisa, iwe hausi kuzowana yapfuura mifananidzo pane Arch maseva epamutemo, sezvo iwo akabviswa. Zvisinei, ini handifunge kuti chirongwa chako zano rakanaka chose nekuti shanduko dzakaitwa mumasiginecha epakeji uye mune dhairekitori dhizaini uye iyo yekuvandudza ichave yakareba uye inogona kunge iine kukanganisa.
Blazek iri chokwadi, nguva yekupedzisira pandakaiisa kanopfuura mwedzi wapfuura yaive musoro nekuda kwekusaina kwemapakeji uye shanduko musystemd kuti kana uchiwedzera zvese zviri pasi pekuvaka zvinopesana. Paive nekudaro pakange paine anoverengeka ekunamatira mapoinzi pakati peiyo yekare yekumisikidza uye neshanduko yazvino. Chinhu chakanaka izvozvi ndechekuti ivo vachaburitsa vhezheni svondo rega rega, saka akati wandei eaya matambudziko achadzivirirwa.
Pindura kune VisitntX
Ini ndakaiisawo neyekare iso uye yakanyatso kupa matambudziko, nemakakatanwa kupfuura chero chinhu. Nekusayina kwepaketi, dambudziko hombe raive kugadzira entropy yakakwana kugadzira kiyi, iyo yakatora nguva ...
Iyo yekumisikidza yakashanda mushe mushe muzviitiko zvakawanda, asi iyo nyowani maviri- kana matatu-script-akaisirwa kuisa system iri nani zvirinani:
1. Kana iwe uine yakakosha pfungwa yeGNU / Linux, zvichave zviri nyore kwazvo kuisa iyo distro nekutevera mashoma mashoma makesi akatsanangurwa muiyo wiki.
2.Kana usiri technical technical weGNU / Linux, haugone kuisa Arch, iwe uchaisa Fedora kana Ubuntu kana Mageia kana chero imwe distro iyo yakazara graphical.
3. Kubatsira kwesystem nyowani ndeyekuti iko zvino kuiswa hakungobvumidze iwe kumisikidza iyo sisitimu asi zvakare icha _install_ zvachose zvese zvaunoda mudanho rimwechete kuitira kuti kana iwe uchiita yekutanga bhuti iwe unotova neyako system yakazara uye kushanda - yeuka kuti neiyo AIF furemu, diki base yakaiswa pane iyo, mushure mekutanga patsva, sisitimu yaive nezvombo.
Arch ndiyo imwe yeakareruka GNU / Linux aripo, ndinoidaidza kuti Linux kune vanhu vane usimbe, nekuti zvese zvinoshanda mushe, pasina matambudziko, kumisikidza kuri nyore uye kuri pachena, iwe unongoisa chete mapakeji iwe aunoda pasina kuisa 45 ekuwedzera mapakeji ... chaizvo kana uchinge wadzidza nzira iyo Arch inoita zvese, zvingangoita kuti usazove nejitters mune yako system kwenguva yakareba uye, kana chimwe chinhu chikaitika, zviri nyore kwazvo kuzvigadzirisa nekuti hapana chakavanzika kana kuzvitonga, ihwo chaizvo hurongwa hwengoro dzisingade kutambisa nguva yakawanda kuidzora: unoisa kamwe uye kanganwa kuibata zvekare.
Zvino, kana iwe uchida distro iyo inokutendera iwe kunyatso kwana kutonga kweiyo sisitimu - kunyange yakanaka kupfuura kushandisa ABS paArch Linux - ini ndinokurudzira Funtoo, iyo 'nyowani' chirongwa kubva kunaDaniel Robbins, muvambi weGentoo Linux; Funtoo inonakidza, dai zvisiri zvekuti ini ndatobata Arch zvakanyatsonaka uye ndinonakidzwa nekushandisa iyo distro ini chokwadi ndakagamuchira Funtoo, inoshamisa distro.
Chii chakanyanya kukosha nezveFuntoo?
Zviri kushamisira zvinotyisa, kana uine nguva ndakaverenga wiki yavo uye zvinyorwa zvine chekuita neiyo nyowani Portage, Metro uye yavo yakavandudzwa kubuda, dai ndaive nemuchina une simba pane yangu i5 yekutanga gen, chimwe chinhu senge i7 chechitatu gen, ndaizo pamwe fambisa kabhuku kangu kuenda kuFuntoo sezvo kuunganidzwa kwemapakeji nechikara chakadai kusinganzwike.
Zvakanaka, zvinoita sekunge zvinonakidza. Ndanga ndichida kuyedza Gentoo kwenguva yakareba, asi ndinofunga ndichaedza Funtoo pachinzvimbo. Ngatione kana ndikazvipa nzvimbo mumazororo aZvita.
Icho chisarudzo che m @. Kwete chete kuti ivo vakachinja nzira yekuisa chimwe chinhu chakaomesesa kune akajairika mushandisi. Asi ikozvino ingori netinstall !! Ini handikwanisi kubatana neInternet pandakaedza kuisa ne netinstall mufananidzo, kunyangwe ndaedza zvakadii.Ndinofunga iyi ndiyo nguva yangu yekupedzisira kuna Arch. yekurambwa, vaigara vari vechidiki.
Ivo havasi vepamusoro, ivo vanongoteedzera huzivi hwavo hweKISS musimboti, kuchengetedza iyo sisitimu iri nyore sezvinobvira kudzivirira chero matanho akasimba anoita kuti mushandisi agadzikane.
Ini ndatozviziva izvo, ini ndashandisa arch kweanopfuura kana mashoma gore rimwe, ivo vane mukurumbira mupfungwa yekuti paunoenda kunobvunza chimwe chinhu mumaforamu, vanokubata hafu zvakashata, kana kusaziva kana iwe usingazive zvimwe zvinhu, kana ivo vanokuudza zvakananga enda verenga iyo wiki kunyangwe kana mubvunzo kana dambudziko rako risipo.
Ini ndinoti newe @ vicky: vanogona kukubata zvakashata kana iwe ukabvunza zvimwe zviri pachena zvisina maturo zvaungadai wakagadzirisa nekufamba kwemaminetsi maviri kana kutsvaga iyo wiki: muchokwadi inofungidzirwa seisina hunhu nevashandisi vane ruzivo kubvunza mibvunzo yakajeka mhinduro yavo iri chimwe chinhu. yakatsenga uye yakatemerwa kare.
Pane zvinopesana i _totally_ akasiyana kesi iwe aunobvunza iwe pausingakwanise kugadzirisa dambudziko rako.
Kana tsamba yako ikaverenga: «Ndine dambudziko iri, pawiki ivo vanotaura pamusoro peizvi uye zvinoratidza zvavanopa hazvizvigadzirise - nenzira iyo zvinongedzo zviri: saka, saka uye saka uye ini ndakaita izvi, izvo uye izvi izvi - uye Googling ini ndawana maviri matsamba mumaforamu X kubva kuvanhu vane dambudziko rimwe chete risingakwanise kuzvigadzirisa futi, chero mazano? »
Ndinokuvimbisa kuti ndaona zvakatumirwa zvine mhinduro dzinopfuura makumi maviri neshanu, pazvinenge zvakakodzera
Zvino, kana iwe ukanyora: «chii chiuno chiuno? Mumwe munhu anogona kundibatsira kukwirisa mufananidzo weIO? Grax! » zvirokwazvo vachakuregeredza zvachose.
Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti Arch is a distro distro kune avo vedu vanofarira kunzwisisa zvinoitika nehurongwa uye vanonyengerwa nematambudziko pavanenge vachinakidza kana kupa imwe pfungwa, isu tese tine debugger mwana mukati medu, pane inopesana nemibvunzo inogona Kuzvipindura-yega inowanzoitika kune mamwe marudzi emaforamu ekumwe kugoverwa.
Iwe unogunun'una nezveArch asi mumaforamu eGentoo kana Debian pachayo, kana iwe ukabvunza mubvunzo wakapusa vanokurambidza iwe nevana vako vese xD
JP (@edconocerte) akadaro
Hahahaha uye ini ndakasara nechido chekuisa iyo graphical nharaunda.
Ndichishandisa virtualbox ndakakwanisa kuisa base system mwedzi wapfuura uye handina kubata ArchLinux zvakare.
Ini ndinofunga izvozvi (pasina AIF) iyo setup yevashandisi vatsva ichave yakaoma.
Parizvino, ipapo ini ndichazvipa ndoga nguva yekupedzisa kuisa iyo graphical nharaunda. Ini ndichiri kutadza kusarudza kuti ndeapi… mazano? > _ <!
Pindura JP (@edconocerte)
Ndinokurudzira xfce4 senzira yekutanga, kana usina kugutsikana, saka ndinokurudzira KDE, nekuti parizvino ndiyo nharaunda izere, kunyangwe iri inorema.
Ndichiona izvo @Blazek, ini ndinokurudzira KDE SC nezvose zviyero zviripo (kunze kweStrigi iyo yaunogona kusiya), kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakareruka unogona kudzima zvese zvinoonekwa zveKDE uye ndinokuvimbisa kuti chichava choumbozha; kana izvo zvauri kutsvaga chiri chinhu chakareruka asi chinoshanda Xfce 4.10 ndiyo yakanyanya kunaka iwe yaunowana.
Kuisa graphical nharaunda iwe haudi AIF ... !! Ini ndinokurudzira Openbox inoenderera neiyo KISS uzivi kana iwe uchida chimwe chinhu chakajeka seCompiz-Standalone.
Pindura kuna diegogabrieldiego
Zvakanaka ini ndicharasikirwa neAIF asi ndinofungidzira kuti kana vagadziri veArch vakasarudza kuibvisa zvaive zviri nani: S zvakare izvozvi sezvo chifananidzo chiri netinstall icho chinotora zvese zvakagadziriswa mapakeji. Kune avo vanoda dzidziso yekukurumidza nekuti iyo wiki iri refu, pano ini ndinosiya iyi yandakawana pamambure http://bit.ly/LL5g0G Ndakaiyedza uye inoshanda kwazvo, haina kundipa dambudziko panguva yekumisikidzwa
Pindura kune iro89
Sarai Arch !!!
Uye zvekuti ndinofanira kudzoreredza Arch yangu, uye handina nguva yakawanda, izvi zvinoitika (nekuda kwechimwe chikonzero chisinganzwisisike ndakachityora pandakaisa Grub2, ndobva ndaita yekumusoro yekumisikidza kumisikidza ine yekare ISO uye ndaitadza kugadzirisa) . Ini ndichafanirwa kupurinda iyo Wiki uye kunamatira kuti netinstall isandipe dambudziko ne Wireless driver (izvo zvaigaro ita). Ingoitika chete kuti ndichave neSabayon ISO padhuze, ndiri mupfupi nenguva, ndinoda PC kuti ishande kwete kuyedza nzira nyowani. Ndinozviedza kamwe, kana zvikasashanda ndinoenda neKubuda muBhokisi.
Simply: zvakaipa kwazvo.
Francisco Mora (@_franciscomora) akadaro
Zvinotaridza senge zano rakanaka kwandiri, iyo .iso chifananidzo neAIF yanga ichitondipa matambudziko, kunze kwekuti zvese zviri neterminal zvinoita kunge zvakanaka, kudzora pane zvandinoita ..
Unogona kuwana imwe yakanaka kwazvo dzidziso pane iyo nyowani yekumisikidza pa:
Pindura kuna Francisco Mora (@_franciscomora)
Usatya nzira nyowani yekuisa ArchLinux! Mukupesana, iri kuwedzera kupfumisa. Ndinokukoka iwe kuti uverenge yangu nyowani-nhanho-nhanho yekumisikidza dzidziso muchiSpanish:
Yakanaka shamwari .. wakaratidza ..
Ndatenda ! , Mupiro.
Kutenda kwauri nekuverenga iyo dzidziso 🙂
Dzidziso huru, yakanyatsotsanangurwa senguva dzose, maita basa kwazvo.
Kutenda nemashoko ako! Kwaziso 🙂
chaizvo, kwandiri nguva dzose yaifanira kunge yakaita seye arch.
Isa arch nekutenda kune yako yapfuura dzidzo uye ikozvino ini ndangozviita mumuchina chaiwo nekuda kweichi chidzidzo chitsva. Uri chifananidzo changu! xD
Taura kuti mazuva mashoma apfuura ini ndakaisa gentoo uye ikozvino kuisirwa arch kwakafanana mune mamwe matanho (zvakareruka uye nekukurumidza, kuti haufanire kunyora kernel kana chero chinhu). Ndakaona zviri nyore kwazvo pasina AIF pane pairi, saka iko shanduko huru!
Ichokwadi, iyo Arch yekumisikidza inopa mweya weiyo gentoo, kunze kwekunge uchinyora kernel uye zvimwe zvehurongwa hwesisitimu. Kutendeseka, mushandisi ane ruzivo muLinux "Console" anogona nyore kuisa Arch, zvisinei avo vasingashandise koni zvachose vanofanira kupa nguva yakawanda kuzviita.
Hahaha, ndinokutendai zvikuru nekuda kweizvozvo. Mhoro!
xD inyaya yekuravira, asi vashandisi vanofanira kutotadza kutya kutyaira kwavo, uye iyo wiki iri nyore kwazvo kutevera uye ndakadzidza zvinhu zvakawanda zvandanga ndisingazive
Ini handizive kuti zvichave sei asi ikozvino unogona kutaura kuti kuisa Arch kwakaoma
Ini hafu ndakaverenga gwara, zvinoita kunge zviri nyore kurimisa, zvirokwazvo dai zvaive sezvavaipenda
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Ini handimbogona kumisikidza vhezheni neAIF uye ini ndakaedza kazhinji kunyora matanho ese uye ndichiaenzanisa newiki, ikozvino zvinoita kunge zvakaoma. Probe Bridge Linux neNosonja Linux, inoita kunge iri padyo pandichasvika kuArchlinux. Ini ndinofunga handikwanise kuisa maoko angu pane ino distro.
archlinux iri nyore kuiisa haina kuomesesa kana iwe wakashandisa ubuntu ndicho chinhu chimwe chete icho kuiswa kuri kubva kuchiteshi nenzira yechip, saka harisi dambudziko, chinhu chega zvimwe mafaira ekumisikidza ari zvakare muwiki Vanotsanangura chaizvo kuti ungazviita sei, asi pakupedzisira pane imwe yakasarudzika distro uye ndinoziva kudiwa kwekushandisa shoma package.
Pindura kune mukaka28
Mehizuke Nueno akadaro
Muchiitiko chekuti AIF yaitaridzika kunge yakasarudzika, chokwadi chekuti vakaibvisa kupfuura chirevo cheKISS chandinoona sekufamba kwakaipa nekuti nekushandisa iyo AIF mimwe maminetsi mazhinji haina kurasikirwa pane yaizorasika kuisa iyo nyowani vhezheni, zvinosuruvarisa (kana nerombo rakanaka ) Ini handina kukwanisa kuyedza kuiswa uku nekuti ini ndangodzoreredza arch yangu mazuva mashoma apfuura (neiyo / lib yekuvandudza) uye isu tichaona mune ramangwana kuti zvichapera sei, netarisiro yekuti ive nani.
Pindura Mehizuke Nueno
Ini handizive kana zvichizenge zviri chaizvo nekuti ini ndiri mutsva kuArchlinux, asi nekuda kwematambudziko neiyo glibc yekuvandudza, ini ndakaita kudzoreredza kubva kuiyo ISO mufananidzo kuburikidza neinternet, kuti ndive nemapepa akavandudzwa. Nenzira iyi ndaive neyekuvandudza pacman uye glibc.
Nenzira iyi iwe unogona kuenderera uchishandisa iyo AIF installer, handiti? Parizvino handina dambudziko kana ndichigadzirisa.
Pindura kuna Archimedes
genesis vargas akadaro
kana zvisati zvave zvakaoma fungidzira izvozvi. asi chandinoziva ndechekuti kana vakaita shanduko iyo distro ichave yakasimba. Ndinofunga kudaro (ndinoti nemirairo)
Pindura kune genesis vargas
Iyo inoti kuisa neAIF kana koni yakaomarara ndiyo imwechete iyo inoti kuisa Gentoo kwakaomarara: HAPANA, HAZVIMIRE! Zviri nyore chaizvo kana iwe uchiziva zvauri kuita!
Kuomeswa ndechimwe chinhu: chimwe chinhu chakaomarara chinhu icho, kunyangwe tichiziva chaizvo zvatinoita, chinova chakaoma kana chinorema, icho chakaomarara, shandisa mutauro zvakanaka, mecacho> :(
Kana iwe usina ruzivo, usati "zvakaoma" kana "nooo, izvo zvakaoma", ingoti: HANDI KUZIVA, kubva panguva yaunoziva kuti iwe hauzive, unogona kutanga KUVERENGA iyo wiki kana tutorials pachinhu uye kutsamwa - hongu vanhu, iri nyaya yekuverenga uye kwete Pamberi, Pamberi, Gamuchira, Pamberi, Pamberi, Pedzisa.
Kwete yekutya kuti HERE NDINOZIVA, hapana munhu akazvarwa achiziva, inyaya yekugara pasi uye kudzidza!
Chinhu chakaomarara ndechekuti, iyo haina kukupa iwe chero mhosho meseji, asi haina kuisa.
imwe nhanho yekudzidza ... kuyedza zvataurwa
Pindura kune malayat
Chinhu chinonyanya kufadza pamusoro peArch maitiro ayo ekumisikidza, nekuti inodzidza. Kusara kwekugovera uku hakundinakidze. Ini ndinoda Debian Kwayedza.
Chinhu chinonyanya kufadza pamusoro peArch maitiro ayo ekumisikidza, nekuti zvinodzidziswa, zvimwe zvacho hazvindifarire. Ini ndinoda Debian Kwayedza.
Chinhu chinonyanya kufadza pamusoro peArch maitiro ayo ekumisikidza. Zvimwe zvacho hazvindifadze.
Kunyangwe ini ndisingashandise Arch ... nguva dzandakaisa yaive 40% yekumisikidza yekumisikidza uye iyo yasara, ndichishandisa iyo keyboard uye nekutevera mirairo kugadzirisa ... ini handizvione sechinhu chakakomba kubvisa iyo inosimudza, iri chete nyaya yekumomesa, kuteedzera kernel, kugadzirisa imwe conf, grub uye kutangazve ... ivo vari kuchinjika kune vedu vedu vanoisa gentoo, izvo zvinoita chaizvo zvakafanana, kungotora nguva yakareba kuti zviumbike. Kuchengetedza nguva mukumisikidza isu tinowanzoshandisa inorarama cd ... kopira mirairo kubva mubhuku uye unama mune koni kuitira kuti usanyora zvakanyanya. Ndinovimba Vapfuri vanogona kuita izvi futi.
Zvakanaka, ini ndinoona maitiro acho akawomera, ndinonyatsoifarira neAIF, ikozvino zvine chekuita nekuva nesystem yakagadzirira mumatanho maviri ini handifunge kudaro (kutaura nezve msx post mune poindi 2) nekuti kubva pakusarudzwa kwemapakeji unogona kuiisa (Zviripachena kuisa kubva kunetiweki, kungave neye netinstall vhezheni kana kusarudza kwainobva mune imwe yema arch server) uye kubva ipapo ita [zvimwe] wosarudza mapakeji ayo anodiwa, kana kumisikidzwa kwawo kwapera nekuti mafaera chete anodiwa ndiwo akagadziridzwa uye ndizvozvo.
Asi zvakadaro zvakapfuura nguva
Ini ndaive ndanyatso kuziva neyekutanga installer asi zvakadaro ndakakwanisa kuiisa :)
Zvakanaka, iyo cfdisk haishande kwandiri, haina kuziva maviri ma disks andinayo xD
Pindura kuna sny
Tsiva Thunar nePCManFm muXfce
Ubuntu WebApps inounza mawebhu kunyorera kudesktop